Emva kokuba ukhangela ukucinga kwakho kwisibuko, uqaphela ukuba isalathisi isasazeka, kwaye kukho i-cellulite emzimbeni. Kukhona ingcamango eyodwa kwintloko yam: "Yintoni endiyenzayo kule meko?". Uninzi lwabasetyhini, kungakhathaliseki ukuba bahluphekile okanye baninzi kakhulu, balwa ne-cellulite.
Ngethemba lokuzisindisa ngokwabo kwingxaki yabo, baqala ukuthenga ama-creams abizayo, baya kwi-salon zeendlela ezilungileyo, kodwa umphumo walo lonke uhlala, ngelishwa, kungekho ixesha eliphindaphindiweyo ingxaki ibuyela njenge-boomerang. Okokuqala, kuyimfuneko ukugxotha ezinye zeengcali ezihamba ne-cellulite. Ikhefu ngokwayo ayinakunceda ukulahla i-cellulite, kunye nokutya okhethwe ngokufanelekileyo akusoloko kusombulula ingxaki. Iintyatye zeenqatha, kunye nezihlunu zihlala zihamba.
Kubalulekile ukusondela kule ngxaki ngokugqithiseleyo kwaye ukufaneleka akuyona indawo yokugqibela kuyo. Emva koko, i-cellulite ibonakala apho kukho iindawo ezininzi ezinamafutha, kunye nemizimba embalwa. Kwaye ukuba unombuzo - "Ngaba ukunyamekela ukunyamekela ukuxhaswa kwe-cellulite?", Emva koko impendulo iya kuba yinto engabonakaliyo - "Ewe! Ekubeni le midlalo ijolise ekuphuhliseni, ukuqinisa ubukhulu besisu, okuphucula ukubonakala kwayo yonke into. Ukuze ufumane umphumo, kunqweneleka ukuba usebenzise rhoqo okanye ubuncinane ama-3-4 ngeveki imizuzu engama-30. Kwiimeko ezinzima zokuzivocavoca umzimba, kubalulekile ukubandakanya izivivinyo ezijoliswe kule ngxaki, oko kukuthi, ukuchaphazela iingxaki-iingqungquthela, imilenze, imilenze.
Ukuhamba kakuhle kweendlela zokuhamba, okunceda kwiinqanaba zokuqala zokulwa neselulite. Unokuhamba nangaliphi na ixesha, zama ngenyanga ukuba usebenze ngezinyawo okanye uye kwiindawo ezimbalwa ngaphambili. Emva kwexesha, uya kuqinisa imilenze yakho, inkqubo ye-cardiovascular, eya kuchaphazela impilo yakho kunye nokunciphisa i-cellulite. Ngaphezulu, ufumana izikhwebu ezinzima kunye namathanga. Kwakhona luncedo kunye nentambo yokuqaqa, ekwajoliswe ekuqiniseni imisipha. Yona kuphela intambo kufuneka ikhethwe ngokufanelekileyo ukuze ingalonakalisi imisipha yomva xa ixhuma.
Ngaba usenokungabaza malunga nokuba impilo iya kunceda ukulahla i-cellulite? Ukuba kunjalo, siphulaphula ngakumbi ...
Ubungqina bungabhekiswa kwizifundo zonyango, eziqhutyelwe kubasetyhini abaqala ukubandakanya ukuqina kwaye banciphisa ukubonakaliswa kwe-cellulite ngama-50%. Khetha ezo zifundo zonyango ezikuvuyisa kakhulu. Umoya omhle inxalenye yenkqubela. Kubalandeli bamanzi iinkqubo, unokubandakanya uqeqesho lwe-aquafitness kwi-training yakho. I-gymnastics echibini, engazange ithandwe, kodwa sele ikwazi ukufumana abayithandayo.
Kulo mdlalo udinga i-swimsuit kunye ne-slippers, kunye nayo yonke into, ulungele ukulwa. Ukusetyenziswa kwamanzi kuqinisa imisipha yomva, kunzima umzimba. Kwi-aquafitness ngokwenza izinto ezifana nokuguqula izandla kunye neenyawo, ukugxuma, ukugijima emanzini. Ubunzima bokuzivocavoca uhlose "ukuphula i-fatty folds" ngamanzi. Kubaqalayo, kunzima ukuyiqonda le nto yobugcisa ukususela okokuqala, kuba ulungelelaniso lwezithuthi luye lwaphuhliswa. Amanzi - simulator emangalisayo, ngenxa yokuba umzimba ufumana umthwalo ophezulu. Ehlabathini, loo mthwalo kunzima ukuwuzalisa, kuba umthetho wokunyamezela awusebenzi kumanzi, ochaphazela iziphumo.
Kwakhona zibandakanya nokuqeqeshwa koqeqesho lwenqanaba loqeqesho, usebenza.
E-ofisini, unokwenza lo mzekelo: ube ngumva eludongeni kwaye njengokungathi udibene phezulu kunye nodonga, lo msebenzi awuthathi ixesha elide, kodwa uphucula uhlobo lweengxaki.
Ngexesha lakho lokuzonwabisa, musa ukulala embhedeni, kodwa usebenze-ukudansa, uhamba emoyeni omtsha, ibhayisekile. I-Movement - isixhobo esihle kakhulu nokukhusela i-cellulite.
Ukwenza yonke imihla, umzekelo, ukuhlawula uya kuphucula iimpawu zesifo.
Ukuqala ukuqeqeshwa kweminqweno kunye namathambo.
Ngenxa yoko, sifumana kuzo zonke ezine. Okokuqala, ngaphandle kokungafihli, pha kamisa umlenze okunene uze uyibambe imizuzwana embalwa. Emva koko, sinciphisa inyawo elisekunene kwaye siphindaphinda umsebenzo ngekhohlo. Kubalulekile ukuphinda le ndlela kathathu ngokuphindwe kabini ngomlenze ngamnye. Njalo, zama ukuphakamisa imilenze yakho phezulu nangaphezulu. Umphumo walezi zifundo ziya kuba imisipha eqinile emva, emathangeni nasematyeni. Kwakhona, kukuhle ukuhlala phantsi ukuze uhambise imilenze ngeendlela ezahlukeneyo, ngoko uhlangothi lwangaphakathi lwamathanga luphephelwa. Sisebenza ngengxaki yesisu. Isikhundla sokuqala - silala phantsi, kunye nezithende zihlala phantsi kwaye ziphakamisa umzimba. Bavuka, bahlala bahlala.
Njengoko ubona, zonke iindlela zokufunda zilula kwaye ziqhelekile ukusuka ebuntwaneni, umnqweno kunye nomsebenzi wemihla ngemihla kuya kunceda ukuxazulula ingxaki yakho.
Kwaye kunconywa kuphela kwizongezo zokufumana impilo ukunyusa ukutya okunempilo. Ngokuqhelekileyo, ukutya kufuneka kube yimifuno, kodwa inyama ephilileyo iyavunyelwa. Kufuneka ukuba uphuze ukuya kwiiliitha ezimbini zamanzi ngosuku. Iimpawu ezijolise ekuphuculeni ukujikeleza kwegazi kwiindawo ezinengxaki zihlala ziqulethe iicu eziluhlaza, i-caffeine kunye necoleta.
Kuphela kwindlela edibeneyo yokulwa nesimo sengqondo se-cellulite iya kubangela iziphumo ezilungileyo.
Izindlela zanamhlanje zokulwa ne-cellulite
Ukuhlambalaza ngokumelene neselulite kunye nobunzima obukhulu
Iiphosiso ezili-9 ekuziphatheni eziphazamisa uphuhliso lwezemisebenzi
I-cold nge sorrel eBelarusian
Yenkomo Yenkomo Yomlilo
Kutheni amadoda aya kwihenyukazi
Indlela yokulungiselela ukusetyenziswa kwe-Biology